Tan iyo intii ummadda Soomaaliyeed ay hanatay xoriyaddeeda xukuumadihii kala dambeeyay ee talada dalka qabtay marnaba may ahayn kuwo ka maran khaladaad iyo dhaliil ay maamul xumo iyo musuqmaasuq kow ka ahaayeen.
Hadaba anigoo ka mid ahaa ardaydii bilawday dugsiyada hoose horaantii toddobaataneeyadii oo ahayd xilligii uu kacaankii barakaysnaa xawaaraha sare ku socday ayaa waxaan xasuustaa waxyaalo dugsiga na loogu dhigi jiray oo ahayd wax lagu tilmaami jiray sababihii dhaliyay kacaankii Oktoobar ee ciidamada qalabka sidaa horseedka u ahaayeen.
Ardayda oo keliya arimahaas looma sheegi jiray ee waxay ahayd arin ay madaxdii kacaanka iyo kaadiriintiisii meel walba kaga eedaami jireen, hase yeeshee jiilkaygii iyo kuwii ka dambeeyayba waxay kaga duwanaayeen bulshada inteeda kale iyagoo aan waxba ka ogeyn xukuumaddahaas kacaanku xukunka ka tuuray xumaan iyo wanaag wixii ay lahaayeen.
Idaacadaha, golayaasha hanuuninta, masraxyada iyo goob kasta oo dad weynaha lagu kulansiiyo ayaa mar walba lagu soo celcelin jiray sababihii dhaliyay kacaanka.
Soomaalidu inta badan ma daneeyaan taariikhaha oo badankoodu xataa ma yaqaaniin taariikhda saxa ahayd ee ay dhasheen oo sannadka uun bay xasuustaan ee maalinta iyo bisha dan kama galaan.
Hadaba xilligii kacaanka laba bilood marka ay bishaanba dadku si aada ayay u dareemi jireen. Waa bisha barakaysan ee Ramadaan iyo bisha Oktoobar oo Maxamed Siyaad talada dalka la wareegay. Labada biloodba waxaa lagu soo dhawayn jiray heeso iyo barnaamijyo idaacadaha laga sii dayn jiray.
Bisha Oktoobar waxaa la soo ban dhigi jiray barnaamijyo lagu magacaabi jiray maxay qabatay tawraddu kuwaas oo looga hadli jiray wax qabadkii kacaanka iyadoo la bar bar dhigayo sagaalkii sannadood ee xukuumadaha rayidku talada dalka hayeen.
Wax qabadkaas intiisa badan waxaa laga fiirin jiray dhinaca tirade ee lama eegi jirin tayadiisa.
Tusaale ahaan waxay oran jireen miisaaniyadda dawladdu kacaanak ka hor intaas bay ahayd imikana waa intaas oo boqolkiibana intaas bay korodhay iyadoo aan la soo bandhigin korodhka sicir babarka(inflation) ee mudadaas si loo ogaado qiimaha dhabta ah ee miisaaniyadda.
Hadaba maalinba maalinta ka dambaysay waxaa soo if baxayay wax yaalo la mid ah arimihii naloogu sheeegay inay ahaayeen kuwii kacaanku ka dhiidhiyay ee sababay in ciidamadu xukunka dalka la wareegaan oo markan kacaanka laftiisii uu ku dhaqmayo.
Marka aad u fiirsato sida ay wax u socdeen waxaadba is oron kartaa in kacaanku uu dad weynahah ka sii dhaadhicinayay hab dhaqanka uu la soo if bixi doono mustaqbalka.
Laaluushka, xatooyada xoolahah ummadda, eexda, qaraaabokiilka iyo guud ahaanba musumaasuqa oo ahaa arimhii la sheegi jiray in ay ahaayen sababihii uu kacaanku ka dhashay ayaa xukuumaddii kacaanku min kor ilaa hoos si aan gabasho lahayn ugu dhaqmi jireen.
Waxay dhihi jireen qaranimadii Soomaaliyeed ayaa halis gashay laakiin halistaasi waxay dhabowday maalmihii ugu damabeeyay ee xukuumaddii cadaadiska ku dhisnayd ee kacaanka.
Iyadoo ay wadanka ka socdaan dagaalo sokeeye oo aan hore loo arag oo qaybo badan oo wadanka ka mid ahna ay dagaaladaasi burburiyeen ayaa hadana kacaankaasi ku guul daraystay inuu qaado talaabooyinkii lama huraanka u ahaa badbaadada qaranimada ummadda ilaa ay dawladdii ka burburto awoodii dalkuna gacanta u gasho mooryaan iyo ma naxayaal.
Daawada ayaa sideedaba waxaa la sheegaa inay tahay sun oo ay abaarto isla markaana disho wax yaalaha xanuunka sababaya. Waxaa kaloo ay daawadu qofka waxyeelo u gaysankartaa markii xaddi tir badan( over dose)la qaato ama ay dhacdo oo cimrigeedu dhammaado.
Inkastoo la sheego in Soomaaliya lagu isticmaalo daawooyin dhacay, dunida sharcigu ka jiro waxaa xaaraan ah in la isticmaalo wax kasta wakhtigiisu dhacay oo daawada iyo cuntadu ugu horeeyaan.
Hadaba kacaanku markuu curtay waxaa uu ku dadaaday inuu shacabka tuso dhibaatada qaranka ku habsatay, waxaanu isku tilmaamay inuu isagu yahay daawadii dhibaatadan looga bogsan lahaa taas ayaana sababtay in bilawgii shacabka intiisa badani ay caleemo qoyan ku soo dhaweeyaan.
Markii la soo gaadhay siteetameeyadii ayaa waxaa soo if baxaysay sida ay dadku uga aaamin baxayeen kacaanka waxaana abuurmay mucaarad hubaysan oo dagaalo ka bilaabay wadanak gudihiisa.
Madaxdii kacaanka waxaa u muuqatay in aanay talo farahooda ku jirin arini meel xun marayso.
Dhammaadkii sideetameeyadii ayaa isku dayeen in ay sameeyaan is bedelo siyasadeed, waxaanay qoreen dastuur cusub oo ogolaanaya hanaanka axsaabta badan hase yeeshee arimahaas oo dhammi waxay u muuqdeen daawo dhacday oo xilligeeda dhaaftay oo bulshada aan u cuntami karin.
Sidoo kale isbedeladaas dheg umay jalaqsiin xoogaggii mucaaradka ahaa ee dagaalkii halkiisa ayay ka sii wadeen ilaa ay xukunka ka ridaan keligii taliye Maxamed Siyaad.
Markii xukunka laga tuuray xukuumaddii kacaanka ayaa shacabku waxay filayeen in Jabhadihii talada qabtay ay keeni doonaan daawo lagu badbaadiyo qaranimada dhiig baxaysay haseyeeshee taasi ma dhicin oo qabiil ayay u kala safteen qaranimana halkaasaa lagu waayay
14kii sanno ee aynu ka soo gudubnay wadanku waxa uu ku sugnaa xaalad fawdo ah oo aan lahayn maamul dhexe oo ay ka taliyaan qabqablyaal tiro badan oo midba midka akle ka soo horjeeddo.
Qab qablayaashaas oo dhawr iyo tobon jeer oo hore ku guul daraystay inay daawo u helaan dhibaatada wadanka ka taagan ayaa waxaa haatan la filayaa inay dawlad ku soo dhisaan shirka mudada dheer ugu socday dalka Kenya.
Hadaba skirka Kenya ee dagaal oogyaashu horboodayaan wuxuu la mid yahay daawo dhacday oo wax lagu dabiibayo madaama ay yihiin dagaal oogayashu kuwo wakhtigoodii soo qaatay oo laga soo gudbay maalintii ay xalka keeni karayeen ummadduna ka aamin baxday maanta.
Bal hadaba waa arki doonaa in daawadan dhacday miyirka iyo maanka inoo soo celiso iyo inay dhib iyo xasarad hor leh inagu abuurto.
Faafin: SomaliTalk.com | June 20, 2004